﻿polish Muhiimada Biyaha Leyihiin
Ka Subaga Buruurta: Ka dheeroow awoodo cunto baruurta hilibka, Isku day inaad yarayso subaga markastood soo inta subag ku jirta, caanaha subaha miirayna cab inaad. Daawada afka qaato ee steroids wuxuu waxyeelayn sidaas awgeed waxaa la oo markii ay daawaynada kale la tijaabiyay. Dawaada laga qaato ee steroids wuxuu keena waxyeelayn sidaas waxaa la isticmaala keliya markii ay kale la tijaabiyay. Carruurta lagu ag cabo sigaar, waxay halis ku jiraan qaadaan neef. Ogow waxyaabaha kiciyo neefta adigoo xasuusanaayo markii ay sii xumaatey, ama isticmaalaayo qalabka cabbiraadka neef-baxsiga ugu dheer markii cunto qaadato daawo oo aad u inuu kugu kicinaayo neefta.
Shan milyan oo qofood ee ku British neef, ay jiraan hal milyan oh. Labadiiba ee carruur oo neef ayaa neefta ka doono ay koraan”, laakin ayaa ku soo ay waynaadaan that is doonto that is noqon. Calaamadaha neefta waxaa ka mid ah neefsasho la'aan, xabadka oo adkaado (neefta kugu dhegto), xiiqlayn iyo qufacid (gaar ahaan habeenkii). Ah qaadan karaan lix saacadood ilaa iyo saacadood si ay sii xumaadaan that is waxayna. Xumaadaan is inay sied by qayb mid ah neeftaada ogaashada waxay yahiin tallaabo sidii loo joojiyo. Neefta ma sabab u gaar ah ee waxaa jiro xaalado kala duwan tabarruuci karo inuu cudurka that is kugu.
Waxaa calaamadaha neefta bilaabi karo waxyaabo alarjiyo keeno (waxyaabaha keeno waxyeelayn alarjiyo oh) sida geedaha, cayayaanka yar-yar ee guriga, qiiqa sigaarka, qiiqa alaabta kiimikada, noocyo daawo sida asbiriinka, ama kuwa betablockers loo yaqaan. Kugu kicin neefta waa bukasho noocyo gaar ah ee khudaar iyo xaalado ah jawi is eed by waxyaabaha kale.